variable ကြိမ်နှုန်း Drive ကို, variable ကြိမ်နှုန်းအင်ဗာ, ကြိမ်နှုန်းအင်ဗာ - Simphoenix
AC အ drive ကို
Simphoenix ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များအတွက် servo ရွေ့လျားမှုထိန်းချုပ်မှုနဂိုအတိုင်းဖြေရှင်းချက်ကိုပွငျဆငျ။
ကျနော်တို့စက်မှုဇုန်ထိန်းချုပ် purduct ပူဇော်
စက်ရုံအလိုအလျောက်အတွက်ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်ကျေနပ်ဖို့ PLC နှင့် HMI ်။
DL100 Series Low-power General-purpose Inverter
DX100 Series Vector Control Universal Inverter
EM3 series human machine interface
CA100 စီးရီး servo drive ကို
E500 စီးရီး Mini-type ကို AC drive ကို
E280 စီးရီးယေဘုယျအားနည်းချက်ကို AC drive ကို
ရှန်ကျန်း Simphoenix လျှပ်စစ်နည်းပညာ Co. , Ltd မှတစ်ဦး State-လက်မှတ်ပုဂ္ဂလိကအဆင့်မြင့်နည်းပညာလုပ်ငန်းအဖြစ်ရှန်ကျန်းသိပ္ပံနှင့်သတင်းအချက်အလက်ဗျူရိုကအသိအမှတ်ပြုဆော့ဖ်ဝဲလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။ 2004 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, Simphoenix အဓိကအားဖြင့်စက်မှုဇုန်ထိန်းချုပ်ထုတ်ကုန်များ၏ R & D, ထုတ်လုပ်မှု, စျေးကွက်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုအတွက်ပါဝင်နေသည်။ အဓိကထုတ်ကုန်အင်ဗာတာ, servo ဒရိုင်ဘာ, PMSM ဖုံးလွှမ်း, etc PLC, HMI, ယနေ့ခေတ်, Simphoenix ထက်ပိုသုံးရာဝန်ထမ်းများရှိပြီးအရောင်းကွန်ယက်ကိုတစ်နိုင်ငံလုံးနှင့်အခြားကျော်ကိုနိုင်ငံပေါင်း 60 နှင့်တိုင်းဒေသကြီးများကိုဖုံးလွှမ်း။
စက် Tool ကို
New product release: DL300 series open-loop vec...
Jun-29-2022 To achieve its carbon peak and neutrality targets, it is urgent for China to promote rapid development of new energy industry and the transformation of traditional industry to save energy and incre...
New product: DL100 series universal low-power i...
Jun-13-2022 DL100 series isasmall general-purpose inverter developed based onanew software and hardware platform to meet more market needs. It has the characteristics of small size, simple operation, compl...
Topping out ceremony of the New Park Jan-14-2022
On the morning of December 22, 2021, the Wanwei Science and Technology Park, invested and constructed by Shenzhen Simphoenix , held the grandly topping-out ceremony in the Huizhou Smart Ecological ... အသေးစိတ်
Simphoenix won the CMCD Innovative Product Award Jan-03-2022
The “China Motion Control/Direct Drive Industry Development Summit Forum and Awards Ceremony” organized by China Transmission was grandly held in Shenzhen, On December 28, 2021. DL100,... အသေးစိတ်
New product release: DX100 series vector general inverter Sep-18-2021
DX100 series isanew vector general-purpose inverter, which inherits on the excellent performance of Simphoenix high-end series inverter. With the vector control, V/F con... အသေးစိတ်
နေရပ်လိပ်စာ: အဆောက်အဦးတစ်ခု, Huichao စက်မှုပန်းခြံ,2nd Gushu ၏လမ်း, Xixiang, Baoan ခရိုင်, ရှန်ကျန်း, ဂွမ်ဒေါင်း, တရုတ်
PRICELIST FOR စုံစမ်းမေးမြန်းရန်
©မူပိုင်ခွင့် - 2010-2018: All Rights Reserved ။
ပိတ်ဖို့ရန်ရှာဖွေသို့မဟုတ် ESC မှ Enter ကိုနှိပ်ပါ
WhatsApp ကိုအွန်လိုင်း Chat ကို!